သင့်ကလေး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ပဋိပက္ခတွေကို ဘယ်လို ကူညီရင်ဆိုင်ပေးမလဲ? - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » သင့်ကလေး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ပဋိပက္ခတွေကို ဘယ်လို ကူညီရင်ဆိုင်ပေးမလဲ?
သင့်ကလေး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ပဋိပက္ခတွေကို ဘယ်လို ကူညီရင်ဆိုင်ပေးမလဲ?
ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
ဟိုးအရင်ကတည်းက ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားလေးလိုပါပဲ ….. ‘ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာဟာ လေတိုက်လို့ သစ်ရွက်ကလေး လှုပ်ရင်တောင် ရယ်ချင်သလို ငိုချင်သလို ဖြစ်တဲ့အရွယ်’လေ။ဒီလို အရွယ်ရောက်ရင် ဆယ်ကျော်သက် အတော်များများဟာ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေကို ခံစားရလေ့ရှိတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ကြီးကောင်ဝင်လာပြီ၊စိတ်ကစားချင်လာပြီ၊ကျောင်းစာတွေကလည်း အရင်နှစ်တွေကထက် ပိုများလာမယ်၊ကျောင်းပြင်ပ အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေ၊အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စုဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုကြုံတွေ့လာရမယ် စသဖြင့် ဒီလိုမျိုး ဘေးတီးပေးနေတဲ့ အချက်တွေကြောင့်လည်း သင့်ကလေးအနေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှု၊အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတတ်ပါတယ်။ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ သင့်ဖက်ကနေ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ နည်းမှန်လမ်းမှန်တွေကို သုံးပြီး ထိန်းကျောင်းပေးမယ်ဆိုရင် ကလေးအတွက် များစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ့်အပြင် သင့်အနေနဲ့လည်း မိဘတယောက်ရဲ့ ပီတိကို အပြည့်အဝ ခံစားရမှာပါ။
၁။ သူတို့လေးတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားပါ။
တကယ်တမ်းက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေဆီက အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကို အားကိုးတကြီး တောင်းခံချင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဓိက အတားအဆီးက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး အကြံဉာဏ်တောင်းချင်တဲ့အကြောင်းကို သူတို့ နှုတ်က ထုတ်ပြောဖို့ အင်မတန်ဝန်လေးကြ၊ရှက်ကြပါတယ်။သားသမီးမြုံစိစိနဲ့ မိဘမြုံစိစိတွေ့ကြတဲ့အခါ ဇာတ်သွားတွေက မလိုအပ်ဘဲ ရှည်ကုန်တာပါ။ဒါကြောင့်မို့ သင့်အနေနဲ့ သူတို့လေးတွေနဲ့ စကားပြောဖို့ အချိန်ကို ကြိုတင်စီမံပြီး သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။တခုပြန်စဉ်းစားရမှာက ဒီအရွယ်လေးတွေဟာ အင်မတန်မှ ဂျစ်တီးဂျစ်ကန် နိုင်တတ်ကြတဲ့အပြင် ကျောင်းစာ၊ကျူရှင်၊သူငယ်ချင်း၊အင်တာနက်၊ဂိမ်း၊ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှု စတာတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို မောင်ပိုင်စီးထားတာမို့ သင့်အနေနဲ့ သိသိသာသာကြီး (ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ ပေါ်တင်ကြီးပေါ့လေ) စကားပြောကြစို့ ဘာညာလုပ်မယ့်အစား တပတ်တခါ အပြင်ထွက်ပြီး မုန့်လေးဘာလေးစားရင်း စကားပြောတာ၊မေမေနဲ့ သမီးဆိုရင်လည်း စီးတီးမတ်မှာ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း မသိလိုက်မသိဘာသာ တီးခေါက်စကားပြောတာမျိုးက အများကြီး အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် သူတို့လေးတွေစိတ်ထဲမှာလည်း သင်ဟာ’ကူညီပါရစေခင်ဗျ/ရှင့်’ဆိုပြီး အမြဲတမ်းရပ်တည်ပေးနေကြောင်း ရိပ်စားမိပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ နောက်မတွန့်စတမ်း တိုင်ပင်လာပါလိမ့်မယ်။
၂။ အိပ်ချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။
ဆယ်ကျော်သက်တယောက်ဟာ တနေ့ကို အနည်းဆုံး ၇-၈ နာရီလောက် အိပ်ချိန်လိုအပ်ပါတယ်။အိပ်ရေးမဝရင် ကျောင်းတွင်း၊ကျောင်းပြင် လုပ်ငန်းတွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတာ၊လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အားနည်းတာ၊ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာ အစရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေက ထက်ချပ်မကွာ လိုက်ပါလာနိုင်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ဆယ်ကျော်သက်တွေ မပြောနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူကြီးတွေရဲ့ အိပ်ချိန်တွေကိုတောင်မှ မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ ခိုးယူနေတာ (လူတွင်ပါလို့ နွားကျားကိုက်တာလို့လည်း ဆိုနိုင်သပေါ့လေ)ဟာ တီဗွီနဲ့ အင်တာနက် (ဖုန်း၊တက်ဘလက်၊ကွန်ပြူတာ စသည်)၊ဂိမ်း စတာတွေပါပဲ။တချို့အရာတွေကို မလုပ်နဲ့လို့ ပြောဖို့ထက် နည်းမှန်ကမ်းမှန် စနစ်တကျ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်တွေနဲ့ ထိန်းကျောင်းကူညီပေးဖို့က မိဘတွေရဲ့ တာဝန်ပါ။ဆိုတော့ ဖုန်း၊တက်ဘလက်စသည် အသုံးပြုတာကို လုံးဝကန့်သတ်တာမျိုး လုပ်မလုပ်ဆိုတာကတော့ မိဘတဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆအတိုင်းသာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီလို အသုံးပြုမှုတွေက အိပ်ချိန်ကို လုံးဝမနှောင့်ယှက်ဖို့ကိုတော့ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ထိန်းချုပ်ရပါမယ်။အိပ်ယာထဲမှာ ဖုန်းသုံးတာ၊ဂိမ်းဆော့တာ တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကန့်သတ်ရပါမယ်။တနေ့ကို အနည်းဆုံး အိပ်ချိန် ၇-၈နာရီရှိဖို့ အချိန်ဇယားဆွဲပေးထားရပါမယ်။
၃။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ခိုင်းပါ။
ကလေးတွေ နှုတ်ခမ်းထော်တဲ့ နောက်ထပ်ကိစ္စတခုကတော့ အပြင်ထွက်ပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ဖို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ ခေတ်တုန်းက ဖုန်း၊ဂိမ်း၊အင်တာနက် စတာတွေ ရှားပါးခဲ့သမို့ အပြင်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားဖြစ်ပေမယ့် ဒီဖက်ခေတ်မှာတော့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် သူတို့လေးတွေကို ပန်းခြံ၊ကန်ဘောင် စတဲ့နေရာတွေကို သွားပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားပြုလုပ်ဖို့၊ပြေးဖို့၊(ပိတ်ရက်တွေမှာ) စောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။သွေးဆောင်ပါ။အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ‘ငါပြောသလိုလုပ်၊ငါလုပ်သလိုလည်းလုပ်’ဆိုတဲ့ သဘောတရားအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်က စံနမူနာကောင်းပြသခြင်းပါ။သင့်ရဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေနဲ့ အတူတူ အားကစားလုပ်ခြင်း၊လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ပြေးခြင်းစတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မိဘနဲ့သားသမီးအကြား ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုကို ပိုမိုတိုးပွါးစေတဲ့အပြင် နှစ်ကိုယ်ကြားစကားပြောဖို့ အချိန်ကိုလည်း ရစေမှာမို့ တချက်ခုတ်သုံးလေးချက်ပြတ်ပါပဲ။
၄။ သူတို့လေးတွေရဲ့ စကားတွေ၊ခံစားချက်တွေကို နားထောင်ပေးပါ။အလွန်အကျွံ ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
သင်ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိအသက်အရွယ်ကို ဝုန်းဒိုင်းဆိုပြီး ရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲ ငယ်ရာက ကြီးလာတာပဲမို့ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတယောက်က ဆုံးမနေရင် လျှာကိုရှည်တယ်၊အပိုတွေပြောနေတယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့မိမှာပါ။သင်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ သိရှိလာခဲ့သမျှတွေကို အတင်းအကြပ် ထိုးထည့်ပေးတာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။သူတို့လေးတွေရဲ့ ပြောစကားကို အဓိက နားထောင်ပေးပြီး သူတို့ ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်၊ဘယ်လို ပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ပြီး ကူညီဖြေရှင်းပေးပါ သို့မဟုတ် လမ်းပြပေးပါ။ဆရာကြီး မလုပ်မိစေပါနဲ့။
သင့်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်သားသမီးလေးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ပြဿနာ၊ခံစားချက်လေးတွေကို ဝိုင်းကူစဉ်းစား အဖြေရှာပေးရာမှာ အထက်ပါ အချက်လေးတွေဟာ အတိုင်းအတာတခုအထိ အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အဓိက အကျဆုံး အချက်ကတော့ ဘယ်လိုအရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘကိုယ်တိုင်က စံနမူနာကောင်းပြနိုင်ဖို့ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ကလေးတွေကို ဘာကြောင့် အတင်းအကြပ် မတောင်းပန်ခိုင်းသင့်သလဲ
ကလေးတစ်ယောက်ပဲမွေးခြင်းသည် ဘာကြောင့် အဆင်ပြေတာလဲ
လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ သင့်ကလေး၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အမျိုးအစား
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဧပွီ 9, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဧပွီ 9, 2018
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးနဲ့ ကြီးပြင်းခြင်း : ဘာတွေ အယူအဆ မှားနေကြသလဲ
ဆယ်ကျော်သက်တွေ သုံးတတ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးမဟုတ်သော မူးယစ်ဆေးများ
“ပရုတ်အေး၊ တောင်ကြီးပဲလှော် စတာတွေနဲ့ မတည့်တဲ့ရောဂါ (သို့) G6PD အင်ဇိုင်း ချို့တဲ့ခြင်း"